Maxkamada sare oo amartay in gunnooyinka guriyaha la siiyo ku xigeenada guddoomiyaasha ismaamulada – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamada sare oo amartay in gunnooyinka guriyaha la siiyo ku xigeenada guddoomiyaasha ismaamulada
Maxkamada sare ee dalka ayaa maanta oo jimco go’aamisay in ku xigeenada barasaabyada maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ay u qalmaan in la siiyo lacagaha gunnooyinka ah ee la xiriira guriyaha ama hooyga.
Garsoore Chacha Mwita ayaa guddiga musharaadka iyo gunnooyinka ee SRC ku amray inuu arrimahaasi si gaar ah u eego.
Xaakinkan ayaa go’aankan soo saaray kadib markii uu dhageystay dacwad oo gudbiyay oo mas’uuliyiintan ay ku doodayeen in lagula kacay cadaalad darro dhanka gunnooyinka ah.
Mr. Mwita ayaa intaasi ku daray inay tahay xadgudub ka dhan ah xuquuqda ku xigeenada guddoomiyaasha maadama ay yihiin shaqaalo dowladeed oo ayna khasab tahay inay xuquuq ahaan la siinadaan saraakiisha kale.
Laba sano ka hor ayay ahayd markii golaha ay ku bahoobeen guddoomiyaasha maamul goboleedyada ee COG ay guddiga musharaadka ku eedeyeen inuusan soo saarin gunnooyinka loogu talagalay ku xigeenada hoggaamiyaasha ismaamulada kala duwan.
← Baaqyada dhanka tacliinta ee loo jeedinaya waalidiinta soomaaliyeed oo isa soo taraya
Madaxweynihii hore ee kuuriyada koonfureed oo 15 sano la xiray →